Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအနုပညာသတင်းအချက်အလက်စက္ကူ "ART bee HIVE" vol.3 + bee! | Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးအသင်း
Aprilပြီလ 2020,4ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
"ပန်းချီဆရာ Keita Kawasaki"
ငါအနှစ် 30 ကျော်ပန်းပွင့်အလုပ်တွင်ပါဝင်ခဲ့ကြပါပြီ။ဂျပန်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်းပန်းချီဆရာတစ် ဦး အနေဖြင့် Keita Kawasaki သည်ပြပွဲများ၊ Spatial ပြသခြင်းနှင့် TV ရုပ်မြင်သံကြားစသည့်ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှဘဝတွင်နေထိုင်သောပန်းပွင့်ယဉ်ကျေးမှုအသစ်ကိုထောက်ခံသည်။မစ္စတာကဝါဆာကီကပန်းများသည်ပန်းများမဟုတ်ဘဲသက်ရှိအရာများဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ထားသည်။
ရာသီဥတုလေးပွင့်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အပြည့်အ ၀ ပွင့်ပွင့်သောပန်းများကိုသင်ကြည့်သောအခါသင်သည်ဘဝ၏အဖိုးတန်ခြင်းနှင့်စွမ်းရည်၏ကြီးကျယ်ခမ်းနားခြင်းတို့ကိုမခံစားရဘဲမခံစားရပါ။ သက်ရှိတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းခံစားဖို့အရေးအကြီးဆုံးပဲ၊ ငါအမြဲတမ်းပန်းပွင့်ကနေတစ်ဆင့်ပေးဆပ်ချင်တယ်၊ ငါ့ရဲ့အခန်းကဏ္ is ကတော့အလှအပအတွက်သာမဟုတ်၊ ပန်းပွင့်တွေဆီကနေရရှိနိုင်တဲ့သင်ယူမှုအမျိုးမျိုးအကြောင်းပါ။
ဖော်ပြချက်တစ်ခုအနေဖြင့် Kawasaki ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်လတ်ဆတ်သောသစ်ပင်များကိုမကြာခဏအတူတကွပေါင်းစပ်ပြီးလူများကိုယခင်ကတစ်ခါမှမမြင်ဖူးသောကမ္ဘာ့အမြင်ကိုစွဲမက်စေသည်။
လူအချို့ကမြေလွတ်မြေရိုင်းများမှအပင်တွေဟာညစ်ပတ်နေပြီးညစ်ပတ်ပေသည်ဟုဆိုကြသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ရင့်ကျက်။ လှပသည့်အမြင်အပေါ် မူတည်၍ အရာဝတ္ထုများ၏တန်ဖိုးသည်လုံးဝပြောင်းလဲသွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူတူပါပဲ။ လတ်ဆတ်သောအပင်များလတ်ဆတ်သော၊ "လူငယ်" နှင့်ညှိုးနွမ်းခြောက်သွေ့သောအပင်များသည်နှစ်များတစ်လျှောက်သူတို့၏စွမ်းအားကိုတဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းသွားစေသော်လည်းဗဟုသုတနှင့်ဥာဏ်ပညာများစုဆောင်းလာသည်။ ၎င်းသည်သူတို့၏အသုံးအနှုန်းများတွင်တွေ့ရသော "ရင့်ကျက်ခြင်း" ဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာ၊ လူကြီးလူငယ်မရွေးတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး လေးစားခြင်း၊ ပန်းပွင့်လေးများအားဖြင့်လေးစားခြင်းဖြင့်ဖန်တီးထားသောအလှတရားကိုခံစားနိုင်သည်။
သက်ရှိသတ္တ ၀ ါများကိုကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်အတူတူအဖော်အဖြစ်ပျော်ရွှင်စေသည့်ဒီဇိုင်းကိုလူကို ဦး စားပေးသောအလှတရားကိုလိုက်စားခြင်း။မစ္စတာကဝါဆာကီ၏ပန်းများကိုမျက်နှာမူထားသည်။
လူသားများသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအစာကွင်းဆက်၏ထိပ်တွင်ရှိနေသရွေ့၎င်းတို့သည်လူသားများအောက်တွင်ရှိသည့်အပင်များ (သို့) တိရိစ္ဆာန်များ၏တန်ဖိုးသည်မလွှဲမရှောင်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ လူ့ဗဟိုပြုလူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ခြင်းသည်ငြင်း။ မရနိုင်သောအချက်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာလူသားတွေဟာသဘာဝတရားရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်သက်ရှိသတ္တဝါတွေမှာ "နေထိုင်ခြင်း" ရဲ့တန်ဖိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားရမယ်။ လူတစ် ဦး ချင်းစီကဒီတန်ဖိုးကိုထပ်လောင်းအတည်ပြုပြသထားတယ်။ ငါတို့ထင်မြင်ယူဆပုံကိုပြောင်းလဲပြီးအဖြစ်အပျက်အမျိုးမျိုးကိုစဉ်းစားလိမ့်မယ်။ ငါ၏အလှုပ်ရှားမှုများ၏အခြေခံ။ "
《 အသေကောင်မြက်အသိုက်မှမွေးဖွားသောနွေ ဦး ။
ပန်းပွင့်ပစ္စည်းများ - Narcissus, Setaria viridis
Keita Kawasaki ၏မှတ်ချက်
《 အသက်ရှင်သောပန်းပွင့်ခေါက်မျက်နှာပြင် / နွေ ဦး spring
ပန်းပွင့်ပစ္စည်းများ - Sakura, Nanohana, Mimosa, Forsythia, Forsythia, ပဲ, ချိုမြိန်၊ Cineraria, Ryu cocoline
ပန်းများနှင့်ခေါက်ထားသည့်မြင်ကွင်းကိုသင်ကြည့်သောအခါအရောင်၊ အမွှေးအကြိုင်၊ ပတ် ၀ န်းကျင်စသည်တို့သည်သင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများပျံ့နှံ့သွားပြီးသင်ကအသိပညာထက် ပို၍ ချမ်းသာနိုင်သည်။နောက်ထပ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ပန်းပွင့်ကိုကြည့်ချင်ပါတယ်အကယ်၍ ဤပန်းပွင့်များသည်ပန်းများသာဖြစ်ပါကသိချင်စိတ်ကဤအလုပ်ဖြစ်လာသည်။
ပန်းပွင့်ပစ္စည်း - Okurareuka၊ Yamagoke၊ ပန်းခြောက်ခြောက်
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြစ်တွယ်နေသောအရောင်များနှင့်ကောင်းကင်မှဆင်းသက်လာသည့်အလင်းများကဲ့သို့သောသဘာဝကမ္ဘာမှသင်ယူရရှိသော "အရောင်ရွှင်လန်းခြင်း" ခေါင်းစဉ်ဖြင့်အလုပ်တစ်ခု။ "Ichiku Tsujigahana" တွင်နေထိုင်သောအပင်များနှင့်သဘာဝအရသာယာလှပသည့်ရှုခင်းကိုဖန်တီးရန်ပေါင်းစပ်ထားသည်။အပင်များတိတ်ဆိတ်စွာဝှက်ထားသောအရိပ်ကောင်းသော။လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြွယ်ဝစွာခံစားခဲ့ရသော Mr. Itchiku Kubota ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်အပင်များ၏အရောင်အမျိုးမျိုးကိုသူကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
[KEITA + Rene Lalique ဖန်ခွက်]
ပန်းပွင့်ပစ္စည်း: gerbera, အစိမ်းရောင်လည်ဆွဲ, အရည်ရွှမ်း
"ပန်းချီဆရာ" Keita Kawasaki ၏မွေးဖွားခြင်း
မစ္စတာ Kawasaki သည်သူ၏စိတ်နှလုံးကို“ ပန်းပွင့်တမန်” အဖြစ်ဆက်လက်ဖော်ပြသည်။ကျွန်တော့်အမေ Mami Kawasaki ၏တည်ရှိမှုသည်၎င်း၏အမြစ်များအကြောင်းပြောရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
Mami Kawasaki သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့စစ်အပြီးတွင်ဒုတိယမြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားအဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးပန်းပွင့်ဆိုင်တွင်ပန်းချီဒီဇိုင်းကိုသဘောကျနှစ်သက်ကာသူမသည်အချိန်ပိုင်းအလုပ်ဖြင့်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးနည်းပညာကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ဂျပန်သို့ပြန်လာပြီးနောက် Sankei Shimbun အတွက်သတင်းထောက်အဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၂ တွင်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ပထမဆုံးပန်းပွင့်ဒီဇိုင်းအတန်း "Mami Flower Design Studio (လက်ရှိ Mami Flower Design School)" ကို Ota Ward တွင် (Omori / Sanno) တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အတွေးအခေါ် "အပင်များနှင့်ထိတွေ့ခြင်းဖြင့်သူတို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ များကိုကြွယ်ဝစွာပျော်မွေ့စေနိုင်သောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလူများကိုမွေးမြူခြင်း" ဟူသောအတွေးအခေါ်သည်အမျိုးသမီးများ၏လွတ်လပ်မှု၊ လွတ်လပ်မှုနှင့်ကြွယ်ဝသောစိတ်များကိုမြှင့်တင်ပေးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးကိုရည်ရွယ်သည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးမှအမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏လက်တွင်အလုပ်တစ်ခုရလို။ တစ်နေ့နေ့တွင်သင်ကြားလိုကြပုံရသည်။ ထိုအချိန်တွင်လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းသည်တံခါးပိတ်လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်၍ အမျိုးသမီးများလူ့အဖွဲ့အစည်းသို့တိုးတက်ရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော် Mami Kawasaki ကကျွန်ုပ်ထင်သည် သူနှင့်ပန်းချီဆရာများအကြားစိတ်ရောဂါပညာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူခဲ့ကြပြီးအနာဂတ်နှင့်အလုပ်ခွင်နှင့်မိသားစုကိုဟန်ချက်ညီနိုင်သည့်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုအထောက်အကူပြုသင့်သည်ဟုမျှော်လင့်ရင်းပန်းချီကားများကိုသင်ကြားပေးခဲ့ဖူးသည်။ ဘ ၀ ၏အဖိုးတန်မှုနှင့်တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုကြီးခြင်း၊ အခြားသူများကိုထောက်ထားစာနာမှုရှိခြင်းနှင့်ကလေးမွေးဖွားခြင်းတို့၏အရေးကြီးမှုကိုအသိအမှတ်ပြုပါ။ အစမှ စ၍ ကျွန်ုပ်သည်မိသားစုချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့ ဦး တည်သွားလိမ့်မည်ဟုတန်ဖိုးထားခဲ့သည်။ "
မစ္စတာ Kawasaki အားပန်းပွင့်ဒီဇိုင်းကမ္ဘာတွင်ရှေ့ဆောင် Mr. Mami Kawasaki မှမွေးဖွားခဲ့သည်။သူသည်အပင်များနှင့်အဆက်အသွယ်ရသောအခါသူကလေးဘဝကိုကုန်ဆုံးခဲ့သလားဟုငါမေးသောအခါသူက "ငါသိသမျှပန်းများသည်နှင်းဆီများနှင့် tulips များဖြစ်သည်"
ကျွန်တော့်အမေဆီက "ငါပန်းပွင့်" ဆုလက်ဆောင်ပညာရေးမရခဲ့ဘူး။ ငါဟာသက်ရှိတွေကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ငါ့ရဲ့မိဘတွေပဲ၊ ဒါကြောင့်ငါကြက်ကိုအစာကျွေးဖို့ရှာမွှေတာကိုငါရူးသွပ်ခဲ့တယ်။ မင်းစဉ်းစားကြည့်ရင်အဲဒါဖြစ်နိုင်တယ်။ အပင်များစိတ် ၀ င်စားမှု၏မူလအစ။ ငါအထက်တန်းကျောင်းပြီးသည့်အခါငါသည်အမေရိကန်တက္ကသိုလ်အလှဆင်ဥယျာဉ်ဌာန၌ဂျပန်နိုင်ငံရှိသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဒီဇိုင်းကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ကြက်သားကိုစိတ်ဝင်စားပြီးပုံနှိပ်နှင့်အိုးလုပ်ငန်း၌အဓိကဘာသာသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ဂျပန်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာငါဟာအိုးထိန်းသမားဖြစ်ဖို့ရည်မှန်းထားတဲ့အိုးအလုပ်ရုံတစ်ခုမှာလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။ "
မစ္စတာ Kawasaki သည်အချိန်ပိုင်းအလုပ်အနေဖြင့် Mami ပန်းပွင့်ဒီဇိုင်းကျောင်းမှစီစဉ်သောအခမ်းအနားတစ်ခုသို့သူရောက်ရှိစဉ်ကသူ၏မိခင်၏ပန်းပွင့်ဒီဇိုင်းနှင့်ပထမဆုံးအဆက်အသွယ်ရှိခဲ့သည်ဟုဆိုသည်
၎င်းကိုမြင်တွေ့ရသောအခါကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်မိသည်။ ပန်းချီဒီဇိုင်းသည်ပန်းများနှင့်ပန်းစည်းများကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ သို့သော်အမှန်မှာ၊ ဖြတ်တောက်ထားသောပန်းများသာမကကျောက်တုံးများ၊ မြက်ခင်းပြင်များနှင့်သဘာဝပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုလည်းကျွန်ုပ်ဖန်တီးခဲ့သည်။ ဒါလုပ်ဖို့ကမ္ဘာကြီးကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်။ "
ပန်းပွင့်ကမ္ဘာသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်း၏အဆုံးအဖြတ်ပေးသောအချက်မှာ Tateshina တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်ပွဲဖြစ်ပြီးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့်ကျွန်ုပ်သွားရောက်ခဲ့သည်။Kawasaki သည်နံနက်စောစောတောတော၌လမ်းလျှောက်နေစဉ်တွင်သူတွေ့မြင်ခဲ့ရသောရွှေရောင်ရောင်နေသည့်နှင်းပန်းတစ်ရုပ်၏ပုံသဏ္byာန်ကိုစွဲမှတ်သွားသည်။
“ ငါမရည်ရွယ်ဘဲစိုက်ကြည့်မိတယ်။ ဘာကြောင့်ဒီလောက်လှတာလဲ၊ ဘယ်သူ့ကိုမှမမြင်ဘဲဘာကြောင့်ဒီလောက်လှပနေတာလဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်။ ဒီအပင်တွေရဲ့လှပမှုကနေစိတ်ခံစားမှုတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်၊
မစ္စတာ Kawasaki သည်ယခုအခါဂျပန်ကိုကိုယ်စားပြုသည့်ပန်းပွင့်အနုပညာရှင်အဖြစ်တက်ကြွစွာပါဝင်သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်းမစ္စတာ Kawasaki ကိုယ်တိုင်သည် Mami Flower Design School ၏ ဦး စီးအရာရှိဖြစ်သည်။လက်ရှိတွင်သူ၏ညီငယ် Keisuke သည်ကျောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်ပြီး၊ ဂျပန်နှင့်နိုင်ငံခြားတွင်စာသင်ခန်း ၃၅၀ ခန့်ရှိပြီး Ota Ward ရှိတိုက်ရိုက်စီမံသောစာသင်ခန်းများကိုဗဟိုပြုထားသည်။
"ကျွန်တော်ဟာဥက္ကiding္ဌရာထူးကနေလူအမျိုးမျိုးနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခွင့်ရခဲ့တယ်၊ ငါအများကြီးလေ့လာခဲ့တယ်။ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ကျနော့်အတွေးတွေကိုပြည်သူလူထုကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူဘူး၊ Mami ပန်းပွင့်ဒီဇိုင်းကျောင်းသို့သော်စကားအသုံးအနှုန်းသည်ကျွန်ုပ်၏မိခင် Mami Kawasaki နှင့်မတူသော်လည်းသူစဉ်းစားနေသောအတွေးအခေါ်နှင့်မူဝါဒသည်ကျွန်ုပ်ကိုအခိုင်အမာအက္ခရာတင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်သည်လည်းထွင်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ စက်ရုံများမှအပင်များမှတဆင့်ပညာရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲဝေမှု။
ရှုထောင့်တစ်ခုအရမြင်သာထင်သာရှိသောအရာများသည်နောက်ဆုံး၌ပြိုလဲသွားမည်ဖြစ်သော်လည်း ၀ ိညာဉ်သည်ထာဝရတည်မြဲလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ယခုအချိန်အထိ Mami Flower Design School တွင်ပညာသင်ကြားခဲ့သည့်လူပေါင်း ၁၇၀,၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ သို့သော်သူတို့၏ဝိညာဉ်ရေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပြီး၎င်းတို့တစ်ခုချင်းစီကိုကလေးပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်အသုံးချနေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်နှစ် ၁၀၀ ဘဝ၌များစွာလုပ်နိုင်သည်ဟုမထင်ပါ။ဒါပေမယ့်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတောင်ပန်းပွင့်လုပ်ငန်းမှာပါ ၀ င်နေသူများနှင့်အတူတကွကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရင်းဂျပန်ပန်းပွင့်ယဉ်ကျေးမှု၏အနာဂတ်ကိုအုတ်မြစ်ချရာ၌အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်ချင်ပါသည်။ "
လူ့စွမ်းအားကိုမွေးမြူသောညီမျှခြင်းသည် "သိချင်စိတ် - လှုပ်ရှားမှု -> လေ့လာခြင်း -> စိတ်ကူး -> အသုံးအနှုန်း" ဖြစ်သည်။
မစ္စတာ Kawasaki သည်ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိနိုင်သည်။ဆိုလိုသည်မှာလူသားတို့၏မူလအာရုံငါးမျိုးကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်း၏သတိသည်အားနည်းလာသည်။ငါဒီဂျစ်တယ်ယဉ်ကျေးမှု၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဒီအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်အံ့သောငှါငါမေးတယ်။
ခေတ်သစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ယဉ်ကျေးမှု၏ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုကအဆင်မပြေမှုများကိုဖြစ်စေခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်“ အဆင်မပြေမှုသည်အဆင်မပြေပါ” ဟုခံစားမိသည်။ ပညာငါးမျိုးနှင့်ခံစားမှုငါးမျိုးမှမွေးဖွားသောစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ငါ "သွေးထွက်သံယိုလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်" အဖြစ်ငါဒစ်ဂျစ်တယ်ယဉ်ကျေးမှုကိုယ်နှိုက်ကငြင်းပယ်ရန်ရည်ရွယ်ထားကြဘူး, ဒါပေမယ့်ငါထင်ဒီဂျစ်တယ်ကိုအသုံးပြု။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဘယ်မှာ၏ခိုင်မာသောအသားအရောင်ခွဲခြားရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခေတ်သစ်လူ့အသက်ကိုချိန်ခွင်လျှာထဲကနေထင်ရပေမည်။ "
မစ္စတာ Kawasaki မွေးဖွားသည့် ၁၉၅၅ (Showa ၃၀) သည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကာလဖြစ်သည်။မစ္စတာကဝါဆာကီကထိုအချိန်ကို“ လူတို့သည်မိမိတို့၏အာရုံငါးပါးကိုအပြည့်အဝအသုံးချပြီးအသိပညာကိုဆည်းပူးခဲ့ပြီးထိုအသိပညာကိုဉာဏ်ပညာအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေသည့်ခေတ်ကာလတစ်ခု” အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပြီးလူတစ် ဦး စီ၏“ လူ့စွမ်းအား” သည်အသက်ရှင်ခဲ့သည်။
"ကျွန်တော့်ကလေးဘဝအကြောင်းပြောရရင်ကျွန်တော့်အဖေကနည်းနည်းခေါင်းမာတယ်၊ သူကကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူစိတ်မ ၀ င်စားဘူးဆိုရင်သူဘယ်တော့မှရယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ (ရယ်သံများ) ။ အောင်မြင်မှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုခုရှိခဲ့တယ်။ ရယ်စရာရယ်၊ တကယ်ကိုအသေးအဖွဲမဟုတ်ဘူးလားငါကျောင်းသားဘဝတုန်းကငါ့မှာမိုဘိုင်းဖုန်းမရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖုန်းမခေါ်ခင်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမိတယ်၊ ကျွန်တော့်အဖေကဖုန်းပြောတဲ့အခါ၊ အမေကအဖြေပေးတဲ့အစရှိတာတွေကိုကျွန်မတုပတယ်။ (ရယ်သံများ) ဒီသေးငယ်သောအရာတစ်ခုစီသည်အသက်ရှင်ရန်ပညာရှိရာရောက်သည်။
ယခုအချိန်သည်အလွန်အဆင်ပြေသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။အကယ်၍ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်၏သတင်းအချက်အလက်ကိုသင်သိလိုပါကအင်တာနက်ပေါ်တွင်အလွယ်တကူသိရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်အရေးကြီးသောအရာမှာအမှန်တကယ်သွားပြီးစမ်းကြည့်ရန်ဖြစ်သည်။ထို့နောက်သင်ကအရသာရှိ၊ မအရသာရှိ၊ မရှိထင်မြင်သည်ကိုအနီးကပ်လေ့လာပါ။ပြီးတော့ငါဘာကြောင့်အရသာရှိတယ်လို့ထင်တာလဲ၊ အဲဒီအတွေးနဲ့ငါဘယ်လိုဆက်သွယ်မှုမျိုးကိုချိတ်ဆက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့အရေးကြီးတယ်။
မစ္စတာကဝါဆာကီ၏အဆိုအရလူ့စွမ်းအားကိုပြုစုပျိုးထောင်ရာတွင်တန်ဖိုးထားရမည့်ပထမ ဦး ဆုံးအရာမှာမိမိ၏“ သိချင်စိတ်” ဖြစ်သည်။အရေးကြီးသည်မှာသိချင်စိတ်ကို အခြေခံ၍“ လုပ်ဆောင်မှု” သို့သွားရန်၊ လေ့လာရန်နှင့်“ စိတ်ကူးစိတ်သန်း” ကိုစဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်။သူက "ဟူသောစကားရပ်" သည်၎င်းထက်ကျော်လွန်သောထွက်ပေါက်တစ်ခုရှိကြောင်းပြောခဲ့သည်။
"ဒီတန်ဖိုးကိုငါအရမ်းတန်ဖိုးထားတယ်။ ဒီအသုံးအနှုန်းဟာလူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်သဘာဝကျပါတယ်။ ကျနော့်အမြင်ကတော့ပန်းချီဒီဇိုင်းနဲ့ပန်းအနုပညာပါ။ ဟောင်းနွမ်းတဲ့ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ကြွေထည်အနုပညာကနေပန်းပွင့်ကိုထွက်သွားခြင်းအဖြစ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကမင်းသာအပြောင်းအလဲဖြစ်တယ်။ ဆိုလိုတာကမင်းဟာအရာရာတိုင်းကိုသိချင်စိတ်၊ မြင်နိုင်၊ မြင်နိုင်၊ မြင်နိုင်အောင်တူညီတဲ့တန်ခိုးရှိတယ်။ "စဉ်းစားခြင်း" ဟာအတူတူပါပဲ။ ပျော်စရာများစွာ။ တီထွင်မှုတစ်ခုစီမတူရင်တောင်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုတည်းအတူတူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘုံတန်ဖိုးတွေကိုရှာပြီးထုတ်လွှင့်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိသေးတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူကြဘူး။ ဒါကခေါင်းမာတဲ့ယုံကြည်ချက်ပဲ။ "
ule သဘာဝတရားစည်းမျဉ်း ၂》
ပန်းပွင့်ပစ္စည်း: tulip, မေပယ်
မြေဆီလွှာများ ၀ န်းရံထားသောကမ္ဘာမြေကိုအရောင်အပင်များသည်ရာသီရောက်လာချိန်တွင်သေဆုံးသွားပြီးနောက်ထပ်အသက်တာ၏အာဟာရအတွက်မြေဆီလွှာအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ထပ်မံ၍ မြေကြီးပေါ်အရောင်သစ်တောက်ပနေသည်။အပင်များ၏ကျဉ်းမြောင်းသောဘဝလမ်းစဉ်သည်ကျွန်ုပ်မည်သည့်အခါကမျှတုပ။ မရသည့်စုံလင်ခြင်းကိုခံစားရသည်။
[KEITA + Taro Okamoto ၏အဆောက်အ ဦး]
ပန်းပွင့်ပစ္စည်း - Gloriosa, Hedera
အနှစ် ၄၀ ခန့်ကောင်းကင်သို့တက်ခဲ့သည့်အပြာရောင်မျှော်စင်။ဒါဟာမစ္စတာ Taro ကျန်ရစ်အနုပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။အဆိုပါမျှော်စင်လည်းပေါရာဏဖြစ်လာပြီးဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်။Mr. Taro Heaven ကိုမေးကြည့်ပါ။ “ ငါဘာလုပ်သင့်သလဲ” အနုပညာသည်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်သည်။ ” စကားနောက်ကွယ်မှရေတံခွန်ကဲ့သို့မျက်ရည်များကိုငါမြင်ခဲ့ရသည်။
လူသားတစ် ဦး စီ၏တည်ရှိမှုသည်အနုပညာဖြစ်သည်
အင်တာဗျူးအပြီးမှာမစ္စတာ Kawasaki ကိုအနုပညာကဘာလဲလို့ငါမေးတဲ့အခါသူက "အသက်တာ၏အဖိုးတန်မှု" ကိုစိတ်ရင်းမှန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့မစ္စတာ Kawasaki အတွက်ထူးခြားတဲ့စိတ် ၀ င်စားမှုကိုရရှိခဲ့သည်။
စဉ်းစားပါပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ငါက "တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်" တွင်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဖော်ပြခြင်းနှင့်ဖော်ပြခြင်းသည်အနုပညာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ လက်ခံသူသည်ကျွန်ုပ်ပေးပို့သောစာတစ်မျိုးမျိုးကိုဘာသာပြန်ရန်အဆင်ပြေသည်ဟုထင်ပါသည်။သို့သော်အချို့သူများကအနုပညာနယ်ပယ်သည်မလိုအပ်ဟုထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မည်၊ သို့သော်အရာရာတိုင်းတွင်ဟန်ချက်ညီရန်အရေးကြီးသည်ဟုငါထင်သည်။အရသာရှိတဲ့အရာတစ်ခုခုရှိရင်၊ မကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုရှိနိုင်တယ်၊ ထိပ်ရှိရင်အောက်ခြေတစ်ခုရှိနိုင်တယ်။ဒီလိုထင်မြင်ချက်ကိုပေးတဲ့အနုပညာစွမ်းအားဟာအနာဂတ်မှာပိုပြီးအရေးကြီးလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Kawasaki သတိရှိရှိတန်ဖိုးထားသည်မှာအနုပညာကိုနှစ်သက်ခြင်းဖြစ်သည်။ထိုစကားလုံး၏အဓိပ္ပာယ်အမှန်မှာမစ္စတာ Kawasaki ၏ပြင်းထန်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ “ မင်းကမပျော်ရွှင်ဘူးဆိုရင်လူတွေကိုဘယ်တော့မှပျော်ရွှင်အောင်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
“ လူတွေကပျော်ရွှင်မှုရအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့မထင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂရုစိုက်ပါ။ ပြီးတော့မင်းဟာပျော်နေတယ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်အနားကလူတွေကိုဂရုစိုက်ပါ။ ပြည်သူလူထုကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများပျော်ရွှင်လာပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အသိုင်းအဝိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်တိုင်းပြည်အားကမ္ဘာကြီးကိုပျော်ရွှင်စေလိမ့်မည်။ အမိန့်မှားသည်မဟုတ်သင့်ကြောင်းကျွန်ုပ်ထင်သည်။ Ota Ward တွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားရင်း Ota Ward ပန်းပွင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းသည်တိုကျိုနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းများသို့ပျံ့နှံ့သွားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုအဆင့်တိုင်းကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်သည်။
ပန်းပွင့်ပစ္စည်းများ - Sakura, tulip, Lilium rubellum, တူရကီအခေါင်းတုံး၊ ချိုသောအာလူး
မမြင်ရသောမျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်သောပန်းများ၏အလှအပနှင့်ဓာတ်ပုံများမှသင်မြင်ရသောပန်း၏လှပမှုသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားသည်။ငါပြားချပ်ချပ်မျက်နှာပြင် (ဓာတ်ပုံ) တွင်ကြည့်ရှုသောအခါပန်း၏အလှအပအာရုံစိုက်, ငါမမြင်ရသေးသောပန်းပွင့်များ၏အသုံးအနှုနျးကိုအမြင်အာရုံဆွဲဆောင်ရန်ကြိုးစားခဲ့
table စားပွဲပေါ်သို့》 သွားပါ။
ပန်းပွင့်ပစ္စည်းများ - Ryuko corine, Turbakia, Astrantia မြို့တော်ဝန်၊ ပူစီနံ၊ geranium (နှင်းဆီ၊ သံပုရာ)၊ ပင်စိမ်း၊ ချယ်ရီ၊ အစိမ်းရောင်လည်ဆွဲ၊ စတော်ဘယ်ရီ
Keita Kawasaki သည်ဆန္ဒပြပွဲတွင်အမျိုးမျိုးသောအလုပ်များကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင်ကယ်လီဖိုးနီးယားအနုပညာနှင့်လက်မှုပညာတက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင်သူမ၏မိခင် Mami Kawasaki တည်ထောင်ခဲ့သော Mami Flower Design School တွင်ဥက္ကofficer္ဌအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးနောက် Keita တံဆိပ်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတီဗွီအစီအစဉ်များနှင့်စာအုပ်များတွင်သရုပ်ပြခြင်းနှင့်အနုပညာတင်ဆက်ခြင်းများတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။သူသည် Spatial installation နှင့် display များအတွက်ဆုများစွာရရှိခဲ့သည်။အနုပညာရှင်များ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါ။သူသည် Flowers Talk (Hearst Fujingahosha) နှင့် "Nicely Flower One Wheel" (Kodansha) ကဲ့သို့သောစာအုပ်များစွာကိုရေးသားခဲ့သည်။
KTION Co. , Ltd.
9:00 to 18:00 (စနေနေ့၊ တနင်္ဂနွေနှင့်ရုံးပိတ်ရက်များတွင်ပိတ်ထားသည်)
Tel: 03-6426-7257 (ကိုယ်စားလှယ်)
Keita Kawasaki ၏ပင်မစာမျက်နှာ
"AOIHOSHI" သည် Roman Kawasaki နှင့် Hiroyuki Suzuki တို့၏ဂီတယူနစ်ဖြစ်ပြီး Keita Kawasaki နှင့်အတူ "Flower Messenger" အဖြစ်တက်ကြွစွာပါဝင်သည်။တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းတွင်သူသည်လေ၊ ရေနှင့်တစ်ခါတစ်ရံမုန်တိုင်းများကဲ့သို့သောသဘာဝကမ္ဘာမှစုဆောင်းထားသောအသံများကိုနမူနာယူပြီးကွန်ပျူတာနှင့်ကီးဘုတ် သုံး၍ ရစ်သမ်နှင့်တေးသီချင်းများကိုဖွင့်သည်။အပင်များမှထုတ်လွှတ်သောဇီဝလျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကိုအသံသို့ပြောင်းလဲစေသည့်“ AOI HOSHI ပန်းပွင့်အသံစနစ်” ကိုတီထွင်ခဲ့ပြီး Keita Kawasaki ပေါ်ပေါက်လာသည့်အခမ်းအနားတွင်ဂီတကိုတာဝန်ယူပြီးဂျပန်နှင့်ပြည်ပရှိအခမ်းအနားများတွင်လည်းပါဝင်သည်။
တီဗီ anime အခင်းအကျင်းသီချင်းများတွင်အလုပ်လုပ်သောရောမနှင့်တေးရေးဆရာ Kawasaki Roman (ညာ) နှင့် Hiroyuki Suzuki (ဘယ်ဘက်) ။
“ အပင်များနှင့်တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခြင်းသည်တစ်ချိန်ကတစ်သက်တာအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ အပင်များကိုကျွန်ုပ်တို့အလွန်သဘောကျသည်။ ”